अर्धनिद्रामा विप्लप समूह – नेपाली सूर्य
December 4, 2017 Nepali SuryaLeaveaComment on अर्धनिद्रामा विप्लप समूह
मंसिर १८, २०७४-सुरक्षा किन फितलो ? भन्ने सन्दर्भका तात्तातो खबर कान्तिपुरले प्रस्तुत गर्दैगर्दा देशका दोस्रो चरणको निर्वाचनको संघारैमा धेरै विस्फोटले उम्मेदवार लक्षित गरेपछि सबैको मनमा एक किसिमको जिज्ञासा पैदा भएको छ ।
किन चुनावी माहोल झन्–झन् कमजोर, फितलो आतंकित बन्नतिर उन्मुख हुँदै जानथालेको होला ? तर अहिलेसम्म कसैले मुख खोल्न चाहेको छैन कि विप्लवका नाममा यति धेरै घुसपैठ भएका पनि हुनसक्छन् भनेर । देशैभरि पड्काउन ल्याइएका विस्फोटक पदार्थ दक्षिणतिरबाट निर्वाध भित्रिरहेको छ र प्रहरीले बम बनाउने पदार्थसहित भारतीयहरू पक्राउ गरिरहेको छ । नेपालमा निर्वाचन भइरहेको छ । प्रभावशाली उम्मेदवार लक्षित विस्फोटन भइरहेका छन् । तर यसको बीचमा भारतीयहरू धमाधम पक्राउ पर्नु कस्तो अचम्मको संयोग ? उनीहरू पक्रनुमा कहीँ नाता छ त नेपालको निर्वाचन र विप्लवको निर्वाचन भाँड्ने रणनीतिमा आयातीत भरियाहरू पक्रिन पुग्नु संयोगमात्र हो ? राज्यले भारतीयहरू चुनाव भाँड्न अभियानमा कि कहीँबाट सञ्चालित रहेछन् भन्ने केलाइकन सार्वजनिक गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?
विस्फोटक पदार्थसहित पक्रिएकाहरू विप्लवसँग किन जोडिए, सरकारले खोजी गर्नुपर्ने विषय हो कि होइन ? उनले अब केही बम पड्काएका भरमा सत्ताकव्जा गर्ने सोच राखेका हुन् भने यो सोचे हुन्छ, उनी अझै अर्धनिद्रामा छन् । निद्राबाट बिउँझेर आँखा–मुख पखालेदेखि होस खुल्थ्यो कि ?
– ekantipur बाट
म केही सेकेण्डले बचेँ, तर साथीहरू ठूलो चोटमा पर्नुभयो- गगन थापा
आमा बिरामी परेका कारण हजुरआमाको रेखदेखमा रहेका बालकको पोखरीमा डुबेर ज्यान गयो, आमा बेहोस
देखाए यस्ता रवाफ दिल निशानीले, आखिर किन ? उनले आफ्नो बदनाम आफै गरेको होइन र ? पुरा विवरण हेर्नुहोस् उनि भित्र काला धब्बाहरु यस्ता छन् !
January 14, 2018 Nepali Surya
राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा
October 27, 2017 Nepali Surya
आयो घरबेटी र भाडामा बस्नेको होस उडाउने कानुन के–के छ प्रावधान ?
January 20, 2018 August 14, 2018 Nepali Surya